ANP ပြောခွင့်ရ ဒေါ်အေးနုစိန် -MOI
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း နောက်ဆက်တွဲရွေးကောက်ပွဲတွေကို ဒီနှစ်မကုန်ခင် ကျင်းပပေးဖို့ ရခိုင်ပါတီ အဖွဲ့အစည်းတွေက တောင်းဆိုနေပေမယ့်၊ ဒီနှစ်အတွင်း ကျင်းပနိုင်ခြေ အလားအလာကတော့ မျှော်လင့်ချက် နည်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေခေါ်ယူချိန်နဲ့ အစိုးရ ဖွဲ့စည်းမှုတွေမှာ ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒထင်ဟပ်မှု မရှိမှာစိုးရိမ်တယ်လို့ ရခိုင်နိ်ုင်ငံရေးသမားတွေက ဝေဖန်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မဆုမွန် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ ၈ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ဘက်က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက မြို့နယ်ပေါင်း ၉ မြို့နယ်အပါအဝင် မဲဆန္ဒနယ်တော်တော်များများမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခွင့် ပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရခိုင်ပြည်သူ သိန်းနဲ့ချီ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဘက်ကရော မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်ကပါ ဒီနှစ်မကုန်ခင် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းမှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း နောက်ဆက်တွဲရွေးကောက်ပွဲတွေ ပြန်ကျင်းပဖို့ တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။
မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးတော့မယ့်အချိန် မကြာခင်လပိုင်းတွေမှာပဲ လွှတ်တော်အသစ် အစိုးရသစ်သက်တမ်းထပ်တိုးတော့မယ့် အချိန်အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြေ အလားအလာ အတော်လေး နည်းသွားပြီလို့ ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခုဖြစ်တဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီANP ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ကရော တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေဘက်က တိုက်တွန်းမှုတွေရှိပေမဲ့ တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ UEC ဘက်က လက်တွေ့ကျတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေ မလုပ်သေးဘူးလို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ပြောခွင့်ရဒေါ်အေးနုစိန်ကပြောပါတယ်။
" ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာ သေချာနေတယ်လေ။ UEC က ဒီနေ့အထိကို မကြေညာသေးဘူး ဆိုတော့-ရွေးကောက်ပွဲတွေ ထပ်ဖြစ်ဖို့ အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ပဲ ကျမတို့ သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း တိုက်တွန်းချက်အတိုင်းသာ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျမတို့က အချိန်ကာလ အကန့်အသတ်တခုက ဆီလျော်ဖို့လိုတယ်လေ။ ဒီလွှတ်တော်အခင်းအကျင်းအသစ်မှာ အတူတကွ ပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာက ဒီလွှတ်တော်ခေါ်ယူရမယ့်ကာလမတိုင်ခင် အနိုင်ရအမတ်စာရင်းတွေဟာ ကြေညာပြီးသားဖြစ်ရမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတွေပြန်လည်ကျင်းပပေးဖို့ ULA/AA နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ သဘောထားကြေညာချက်တွေ ထုတ်တဲ့နောက်ပိုင်း သမ္မတကြီးရဲ့ တိုက်တွန်းချက် ဒါတွေကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင် ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့ ကြိုကြေညာခဲ့ရင်တော့ အခုလာမယ့်အစိုးရသစ် လွှတ်တော်သစ် အခင်းအကျင်းကို မှီနိုင်မယ်လို့ကျမတို့က ယူဆခဲ့တာပေါ့။
အခုကျတော့ တစ. တစနဲ့ဒီဇင်ဘာလည်း ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ တကယ်လို့ ဇန်နဝါရီလဆန်းမှာ ကြေညာလို့သာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း လွှတ်တော်အခင်းအကျင်းအတွက် ၂၁ရက် ကြိုတင်ပြီး ဖိတ်ကြားလွှာတွေ ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေနဲ့ရော ဆီလျော်ပါဦးမလားပေါ့နော်။ ဆိုတော့ ပထမတော့ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြတယ် နောက် ကိုဗစ်အကန့်အသတ်တွေ နဲ့ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ ကျမတို့မျှော်လင့်ချက်ကြီး ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ UEC မှာ အာဏာကုန် ပြဋ္ဌာန်းထားချက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် လုပ်မယ်ဆို လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထား ရှိနေပါတယ်လို့ ကျမပြောချင်ပါတယ်။ "
ဒီလို ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း နောက်ဆက်တွဲရွေးကောက်ပွဲတွေ မကျင်းပနိုင်ခဲ့ရင် အစိုးရသစ် လွှတ်တော်သစ် အဆင့်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အမျိုးသား၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွေတင်မကပဲ ပြည်နယ်အဆင့် လွှတ်တော်မှာလည်း မဲဆန္ဒနယ် နယ်မြေအလိုက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုမှု အားနည်းသွားမှာကိုလည်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဘက်က စိုးရိမ်နေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြသန်းက ပြည်သူတွေအတွက် ကိုယ်စားပြုမှု နဲ့ အစိုးရကိုလွှတ်တော်က ထိန်းကျောင်းမှုပိုင်း အတော်လေး အားနည်းသွားမယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ သူ့စိုးရိမ်ချက်ပြောပြပါတယ်။
" ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဆိုရင် အခုကျတော့ မြို့နယ် ၉မြို့နယ် နောက် အမ်းမဲဆန္ဒနယ်က တနေရာ၊ တောင်ကုတ်မဲဆန္ဒနယ်တနေရာစတဲ့ ဒီမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီနယ်မြေတွေက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်ထဲကို ဝင်ရောက်လာနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီ့နယ်မြေတွေရဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေးစသည်ဖြင့် ပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှ တင်ပြဖို့အတွက်ကို တော်တော်ကို အားနည်းသွားပါတယ် တော်တော်ကို အခက်အခဲရှိသွားပါတယ်။ အမှန်တော့ ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်အသံဆိုသလို ပြည်သူတွေအတွက်ကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြည်သူ့အသံတွေကို မကြားရတော့မယ့်သဘော သက်ရောက်သွားမှာပါ။
အစိုးရအဖွဲ့ကို ထိန်းကျောင်းဖို့အတွက်လည်း တော်တော်လေးကို အခက်အခဲရှိသွားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကို မေးခွန်းတွေမေးဖို့ အဆိုတွေတင်ဖို့အတွက်ကို တော်တော်ကို အခက်အခဲတွေရှိသွားမှာပါ။ အဲ့တာကြောင့် ကျနော့်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုတာက ဘာပဲပြောပြော ကျန်နေသေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ၉မြို့နယ်နဲ့ အမ်းမြို့နယ် တောင်ကုတ်က မဲဆန္ဒနယ် ၂နေရာအတွက်ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့မှကောင်းမွန်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။”
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကတော့ ပေါက်တော၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် စတဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း ၉ မြို့နယ်လုံးကျွတ်နဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်က ရပ်ကွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂ အုပ်စု၊ အမ်းမြို့နယ်က ရပ်ကွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၉ အုပ်စု၊ စစ်တွေမြို့က ကျေးရွာအုပ်စု ၄ အုပ်စု၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်က ရပ်ကွက် ၁၀ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂ အုပ်စုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
လှတျတျောသဈ မတိုငျခငျ ရခိုငျမှာ ရှေးကောကျပှဲ ပွနျကငျြးပရေး အလားအလာမရှိ (ANP ပွောခှငျ့ရ ဒျေါအေးနုစိနျ)
ရခိုငျပွညျနယျတှငျး နောကျဆကျတှဲရှေးကောကျပှဲတှကေို ဒီနှဈမကုနျခငျ ကငျြးပပေးဖို့ ရခိုငျပါတီ အဖှဲ့အစညျးတှကေ တောငျးဆိုနပေမေယျ့၊ ဒီနှဈအတှငျး ကငျြးပနိုငျခွေ အလားအလာကတော့ မြှျောလငျ့ခကျြ နညျးနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရှေးကောကျပှဲရလဒျအရ ပွညျနယျလှတျတျောတှခေျေါယူခြိနျနဲ့ အစိုးရ ဖှဲ့စညျးမှုတှမှော ရခိုငျပွညျသူတှရေဲ့ ဆန်ဒထငျဟပျမှု မရှိမှာစိုးရိမျတယျလို့ ရခိုငျနိုငျငံရေးသမားတှကေ ဝဖေနျပါတယျ။ အပွညျ့အစုံကို ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးသတငျးထောကျ မဆုမှနျ စုစညျးတငျပွထားပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နိုဝငျဘာ ၈ရကျက ကငျြးပခဲ့တဲ့၂၀၂၀ပွညျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲကွီးမှာ လှတျလပျပွီး တရားမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ဖွဈနိုငျခွမေရှိဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ UECဘကျက ရခိုငျပွညျနယျတှငျးက မွို့နယျပေါငျး ၉ မွို့နယျအပါအဝငျ မဲဆန်ဒနယျတျောတျောမြားမြားမှာ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပခှငျ့ ပိတျခဲ့တဲ့အတှကျ ရခိုငျပွညျသူ သိနျးနဲ့ခြီ ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျတပျဘကျကရော မွနျမာ့တပျမတျောဘကျကပါ ဒီနှဈမကုနျခငျ ဒီဇငျဘာလ အတှငျးမှာပဲ ရခိုငျပွညျနယျတှငျး နောကျဆကျတှဲရှေးကောကျပှဲတှေ ပွနျကငျြးပဖို့ တိုကျတှနျးထားကွပါတယျ။
မကွာခငျရကျပိုငျးမှာပဲ နှဈဟောငျးကုနျလို့ နှဈသဈကူးတော့မယျ့အခြိနျ မကွာခငျလပိုငျးတှမှောပဲ လှတျတျောအသဈ အစိုးရသဈသကျတမျးထပျတိုးတော့မယျ့ အခြိနျအထိ ရခိုငျပွညျနယျတှငျး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျခွေ အလားအလာ အတျောလေး နညျးသှားပွီလို့ ရခိုငျနိုငျငံရေးပါတီကွီးတခုဖွဈတဲ့ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီANP ကပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
အစိုးရအဖှဲ့ကရော တပျမတျောနဲ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျတှဘေကျက တိုကျတှနျးမှုတှရှေိပမေဲ့ တာဝနျအရှိဆုံးဖွဈတဲ့ UEC ဘကျက လကျတှကေ့တြဲ့ဆောငျရှကျခကျြတှေ မလုပျသေးဘူးလို့ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ANP ပွောခှငျ့ရဒျေါအေးနုစိနျကပွောပါတယျ။
" ရှေးကောကျပှဲ မဖွဈသေးဘူးဆိုတာ သခြောနတေယျလေ။ UEC က ဒီနအေ့ထိကို မကွညောသေးဘူး ဆိုတော့-ရှေးကောကျပှဲတှေ ထပျဖွဈဖို့ အခွအေနမေရှိသေးဘူးလို့ပဲ ကမြတို့ သုံးသပျရမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျတမျး တိုကျတှနျးခကျြအတိုငျးသာ လုပျမယျဆိုရငျလညျး ကမြတို့က အခြိနျကာလ အကနျ့အသတျတခုက ဆီလြျောဖို့လိုတယျလေ။ ဒီလှတျတျောအခငျးအကငျြးအသဈမှာ အတူတကှ ပါဝငျလာနိုငျဖို့အတှကျဆိုတာက ဒီလှတျတျောချေါယူရမယျ့ကာလမတိုငျခငျ အနိုငျရအမတျစာရငျးတှဟော ကွညောပွီးသားဖွဈရမယျ။ ရှေးကောကျပှဲတှပွေနျလညျကငျြးပပေးဖို့ ULA/AA နဲ့ မွနျမာ့တပျမတျောနဲ့ သဘောထားကွညောခကျြတှေ ထုတျတဲ့နောကျပိုငျး သမ်မတကွီးရဲ့ တိုကျတှနျးခကျြ ဒါတှကေိုခွုံကွညျ့လိုကျရငျ ရှေးကောကျပှဲတှကေငျြးပမယျလို့ ကွိုကွညောခဲ့ရငျတော့ အခုလာမယျ့အစိုးရသဈ လှတျတျောသဈ အခငျးအကငျြးကို မှီနိုငျမယျလို့ကမြတို့က ယူဆခဲ့တာပေါ့။
အခုကတြော့ တစ. တစနဲ့ဒီဇငျဘာလညျး ကုနျတော့မယျဆိုတော့ တကယျလို့ ဇနျနဝါရီလဆနျးမှာ ကွညောလို့သာ ကငျြးပနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျလညျး လှတျတျောအခငျးအကငျြးအတှကျ ၂၁ရကျ ကွိုတငျပွီး ဖိတျကွားလှာတှေ ထုတျရမယျဆိုတဲ့ ဥပဒနေဲ့ရော ဆီလြျောပါဦးမလားပေါ့နျော။ ဆိုတော့ ပထမတော့ လုံခွုံရေး အကွောငျးပွတယျ နောကျ ကိုဗဈအကနျ့အသတျတှေ နဲ့ ဒီဇငျဘာလကုနျအထိ ကမြတို့မြှျောလငျ့ခကျြကွီး ခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ UEC မှာ အာဏာကုနျ ပွဋ်ဌာနျးထားခကျြရှိပါတယျ။ဒါကွောငျ့ လုပျမယျဆို လုပျလို့ရတဲ့အနအေထား ရှိနပေါတယျလို့ ကမြပွောခငျြပါတယျ။ "
ဒီလို ရခိုငျပွညျနယျတှငျး နောကျဆကျတှဲရှေးကောကျပှဲတှေ မကငျြးပနိုငျခဲ့ရငျ အစိုးရသဈ လှတျတျောသဈ အဆငျ့ဆငျ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျော အမြိုးသား၊ ပွညျသူ့လှတျတျောတှတေငျမကပဲ ပွညျနယျအဆငျ့ လှတျတျောမှာလညျး မဲဆန်ဒနယျ နယျမွအေလိုကျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားပွုမှု အားနညျးသှားမှာကိုလညျး ပွညျနယျလှတျတျောဘကျက စိုးရိမျနပေါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျ ပွညျနယျလှတျတျော ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးမွသနျးက ပွညျသူတှအေတှကျ ကိုယျစားပွုမှု နဲ့ အစိုးရကိုလှတျတျောက ထိနျးကြောငျးမှုပိုငျး အတျောလေး အားနညျးသှားမယျ့အခွအေနရှေိနတေယျလို့ သူ့စိုးရိမျခကျြပွောပွပါတယျ။
" ကနြျောတို့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောမှာဆိုရငျ အခုကတြော့ မွို့နယျ ၉မွို့နယျ နောကျ အမျးမဲဆန်ဒနယျက တနရော၊ တောငျကုတျမဲဆန်ဒနယျတနရောစတဲ့ ဒီမဲဆန်ဒနယျတှမှော ရှေးကောကျပှဲတှေ မကငျြးပနိုငျခဲ့တဲ့ အတှကျကွောငျ့ ဒီနယျမွတှေကေ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှေ လှတျတျောထဲကို ဝငျရောကျလာနိုငျခွငျး မရှိတဲ့အခါကတြော့ အဲ့ဒီ့နယျမွတှေရေဲ့ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေး ကနျြးမာရေး ပညာရေးစသညျဖွငျ့ ပွညျသူတှရေဲ့ အခကျအခဲတှကေို လှတျတျောကနပွေီးတော့မှ တငျပွဖို့အတှကျကို တျောတျောကို အားနညျးသှားပါတယျ တျောတျောကို အခကျအခဲရှိသှားပါတယျ။ အမှနျတော့ ပွညျသူ့အသံ လှတျတျောအသံဆိုသလို ပွညျသူတှအေတှကျကို လှတျတျောထဲမှာ ပွညျသူ့အသံတှကေို မကွားရတော့မယျ့သဘော သကျရောကျသှားမှာပါ။
အစိုးရအဖှဲ့ကို ထိနျးကြောငျးဖို့အတှကျလညျး တျောတျောလေးကို အခကျအခဲရှိသှားပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ အစိုးရအဖှဲ့ကို မေးခှနျးတှမေေးဖို့ အဆိုတှတေငျဖို့အတှကျကို တျောတျောကို အခကျအခဲတှရှေိသှားမှာပါ။ အဲ့တာကွောငျ့ ကနြေျာ့အနနေဲ့တိုကျတှနျးလိုတာက ဘာပဲပွောပွော ကနျြနသေေးတဲ့ ရှေးကောကျပှဲမလုပျနိုငျခဲ့တဲ့ ၉မွို့နယျနဲ့ အမျးမွို့နယျ တောငျကုတျက မဲဆန်ဒနယျ ၂နရောအတှကျကို ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျမယျဆိုရငျ ပိုပွီးတော့မှကောငျးမှနျမယျလို့ ယုံကွညျမိပါတယျ။”
ရခိုငျပွညျနယျတှငျး ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျခဲ့တဲ့ မဲဆန်ဒနယျမွတှေကေတော့ ပေါကျတော၊ ပုဏ်ဏားကြှနျး၊ ရသတေ့ောငျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော၊ ကြောကျတျော၊ မငျးပွား၊ မွပေုံ၊ မွောကျဦးမွို့နယျ စတဲ့ မွို့နယျပေါငျး ၉ မွို့နယျလုံးကြှတျနဲ့ ကြောကျဖွူမွို့နယျက ရပျကှကျ ၂ ကြေးရှာအုပျစု ၅၂ အုပျစု၊ အမျးမွို့နယျက ရပျကှကျ ၃ ကြေးရှာအုပျစု ၂၉ အုပျစု၊ စဈတှမွေို့က ကြေးရှာအုပျစု ၄ အုပျစု၊ တောငျကုတျမွို့နယျက ရပျကှကျ ၁၀ ရပျကှကျ ကြေးရှာအုပျစု ၅၂ အုပျစုတှေ ပါဝငျပါတယျ။